NY Capital Karen New Year – နယူးယောက် နေပြည်တော်က ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ၊ အယ်ဘနီ) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၇
Albany 2756 Karen New Year celebration is held in William S. Hackett Middle School on Saturday, Jan. 21, 2016.
In the celebration, there are three parts: opening, traditional dance and concert.
Begin to end of the celebration; all audience can have native food, dessert and drinks.
Saw Thein Win said the New Year is the biggest celebration of the year for the Karen people.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူယောက်ပြည်နယ်၊ မြို့တော် (အယ်ဘနီ) မှာ ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ဇန္နာဝါရီ ၂၁ ရက် ၂၀၁၇ နေ.မှာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်တဲ.ဧည်. ပရိတ်သတ်များ ဟာ.ဖို.ဒုံးအဖွဲ. ယူတီကာ ဒုံးအဖွဲ. နေပြည်တော် ဒုံးအဖွဲ. အထူးနှစ်ခြိုက်ကြပါသည်၊ စံနစ်ကျစွာ ဧည်.ခံကျွေးမွေးခြင်း သီဆိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု တို.မှာအားရဂုဏ်ယူစရာကောင်းလှပါသည်။
​Call to unite in dance
Hartford, CT Traditional team dance at New York Capital, Albany Karen New Year Celebration | William S. Hackett Middle School
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူရောက်ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်မှာ့  ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဟာ့ဖို့ဒုံးအဖွဲ.
​Raisingaflag
Utica Traditional team dance | New York Capital, Albany Karen New Year Celebration | William S. Hackett Middle School
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူရောက်ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ယူတီကာ ဒုံးအဖွဲ.
​Bamboo Challenge Dance
Capital Traditional team dance | New York Capital, Albany Karen New Year Celebration | William S. Hackett Middle School
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူရောက်ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် နေပြည်တော် ဒုံးအဖွဲ.
( Karen to Burmese Translator Sawtheinwin Theinwin ဘာသာပြန်သည်။)